Maxkamadda Sare Oo Lagu Daadiyay Waraaqo Digniin Ah Ilo wareedyo u dhuun daloola Hay’addaha Garsoorka ayaa sheegay in Maxkamadda Sare ee Hargeysa lagu daadiyay qoraalo loogu hanjabayo Garsoorayaasha ka hawl-gala, kuwaasoo looga dan lahaa in lagu cabsi galiyo si aanay ugu dhawaaqin Natiijadda Doorashada la filayo in dhawaan loo soo gudbiyo.
Arrintan ayaa la sheegay in ay dhacday khamiistii aynu soo dhaafnay, waxaana lagu war helay nuqulo ka mid ah qoraalkaas oo laga helay gudaha xaruntaasi, kuwaasoo markii la eegay ay ku qornaayeen weedho muujinaya inay soo qoreen dad ka soo horjeeda Natiijadda Doorashadii Golayaasha Deegaanka ee Dalka ka dhacday, taasoo abuurtay muran siyaasadeed oo aafaysay Komishanka Doorashooyinka iyo hawlihii kale ee Qaranku lahaaba.
Inkasta oo aanu wargeyska Waaheen helin Nuqul ka mid ah qoraaladaasi Hanjabaada ah ee lagu daadiyay Maxkamadda Sare, hadana sida ay sheegeen ilo wareedka aanu warkan ka helnay waxa gacanta ku haya Maamulka Maxkamadaasi iyo Garsoorayaasha kuwaasoo loo gacan geliyay markii la arkayba.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland Garyaqaan Yuusuf Ismaaciil oo aanu isku daynay inaanu ka hubino arrintan ayaanay noo suurto-gelin Telefoonkiisa oo xidhnaa Darteed, sidoo kalena shaqaalaha ka hawlgala qaarkood ayaanay noo suurto gelin inaanu Telefoonkooda ku helno maadaama ay shalay Jimce ahayd.
Maxkamadda Sare ee Somaliland ayaa qaaday dacwado siyaasdeed oo u dhaxeeyay khilaafaad ka dhasahy Ururarada iyo Axsaabta Siyaasadda Dhexdooda, sidoo kale waxa ay ka gar-naqeen Dacwadii u dhaxaysay Guddida Diiwaangelinta Ururadda Siayaasadda iyo Ururadii ku hadhay kala saarista Tartankii ugu horeeyay ee loo qabtay Axsaabta iyo Ururadda Siyaasadda, dhamaantoodna Go’aamadii ay ka soo saareen wax dhibaato ah oo ka dhashay may jirin.
Hase yeeshee Natiijadda la filayo imika waxa ka taagan cabashooyin badan oo ay ka tirsnayaana Musharaxiintii tartamaysay iyo Ururada Siyaasaduba Komishanka Doorashooyinka oo intii ay ku guda jireen Tirinta Codadkii doorashadu ay dhaceen qaladaad ay sameeyeen oo dhiig ku daatay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Data-dii Degmadda Axmed Dhagax oo masaxantay iyo Natiijadii Degmadda Hargeysa oo goobaha qaarkood la laba jibaaray, taasoo keentay in ay is dhaafaan xildhibaano ku soo baxay Doorashadu.
Si kasta ha ahaatee, inkasta oo ay Ururada Siyaasadda qaarkood sheegeen inay ku qancayaan natiijadda Doorashada marka ay Maxkamadda Sare ee Dastuuriga ahi ku dhawaaqdo, hadana waxa jira Musharixiin iyo Ururo aan ku qanacsanayn Natiijadaasi oo loo baahan yahay in la dhagaysto Cabashooyinkooda, gaar ahaana waxa ay dhibaatadu ka taagan tahay iyaga oo aan ku wacyi gashanayn dariiqa ay u marayaan cabashadooda sida Xeer No: 20 Tilmaamayo, maadaama aanay helin wacyigelin ku filan.